Maitiro ekuchinjisa mafoto kubva ku iPhone kuenda pakombuta | IPhone nhau
Kuvhurwa kweiyo iPhone 7 kwaive kupera kwemidziyo iyo kambani yakatangisa ne16 GB, nzvimbo yekuchengetera iyo yakasiya isina kana nzvimbo yekufambisa kune vashandisi vakatenga iyi modhi. Neraki, ese mamodheru anopiwa neApple, zvese mu iPhone renji uye neiyo iPad renji inopa 32 GB yekuchengetera, nzvimbo yatinogona kuita zvakanyanya kupfuura nehafu yenzvimbo, nzvimbo iyo yaisatombove yechokwadi nekuti kana uchinge wabvisa nzvimbo kuti iyo yekushandisa system inogara isu takangoita zvishoma zvishoma kupfuura 11 GB yakasara.
Sezvo isu tichishandisa chishandiso chedu, kungave nekuisa kunyorera kana kurekodha mavhidhiyo uye kutora mafoto, nzvimbo yacho yakadzikira zvekuti tinomanikidzwa kuibatanidza kune yedu komputa, ingave PC kana Mac kuburitsa mudziyo uye, sezvinei, tsigira mapikicha uye mavhidhiyo atakaita kusvika zvino. Kana uchibatanidza yedu iPhone, iPad kana iPod touch kukomputa yedu, isu tinofanirwa kuziva kuti nzira dzekuburitsa zvirimo zvatakachengeta zvakasiyana mune ese mashandiro masisitimu, tichigara tichiwana mhedzisiro yakafanana pakupedzisira.
1 Maitiro ekuchinjisa mafoto kubva ku iPhone kuenda Mac
1.1.1 Darika mifananidzo yakasarudzwa chete
1.2 Mifananidzo yekushandisa
1.3 Iko kupi mifananidzo iyo yatinopinza mukati meMapikicha application pane yedu Mac yakachengetwa?
2 iPhone Dhata Yekutamisa - EaseUS MobiMover
3 Maitiro Ekuchinjisa Mapikicha kubva ku iPhone kuenda kuWindows
3.2 Nzira yechinyakare
3.3 Tumira mifananidzo nemavhidhiyo
4 Maitiro Ekuchinjisa Mapikicha kubva ku iPhone kuenda kuCloud
4.1 Mapikicha eGoogle
4.3 Amazon gore
Maitiro ekuchinjisa mafoto kubva ku iPhone kuenda Mac
iCareFone imwe ye software yakazara kwazvo yatinogona kuwana nhasi ku bvisa iyo mifananidzo uye mavhidhiyo kubva kune yedu iPhone, iPad kana iPod touchKana isu tisingade kuomesa hupenyu hwedu nesarudzo dzakasiyana idzo mbiri macOS inotipa isu natively, pamwe neWindows, nenzira dzakaomarara uye dzisinganyatso nzwisisika.
Mhinduro iyo Tenorshare inotipa kuburikidza nayo iCareFone inotibvumidza isu kuwedzera kune kurumidza kuendesa mifananidzo yedu nemavhidhiyo kubva kune chishandiso cheIOS kuenda kune komputa, mukana wekupfuudza iyi mhando yezvinyorwa kubva kuTunes kuenda kune yedu kifaa kana zvinopesana, kunyangwe muchinyorwa ichocho tichazotarisa pane yekutanga sarudzo yandataura nezvayo.
Darika mifananidzo yeedu iPhone, iPad kana iPod touch neiyo Tenorshare iCareFone chirongwa iyo yakapusa uye inokurumidza maitiro, maitiro atino tsanangura pazasi.
Chekutanga pane zvese, kana tangovhura application, isu tinofanirwa batanidza yedu iPhone, iPad kana iPod touch kune komputa. Kana pachiratidziro chemudziyo, ukatibvunza kana tichida kupa mvumo kukomputa kuti ikwanise kuwana zvirimo, tinya paTrust, nekuti zvikasadaro, chishandiso hachizokwanisa kubatana nekombuta, uye nekudaro application yatiri kuzoshandisa.
Tevere, tinya pane sarudzo Imwe-tinya kunze mafoto kuPc. Panguva ino, iko kunyorera kunotumira kunze kwese mifananidzo nemavhidhiyo atakachengeta pane yedu iPhone, iPad kana iPod touch, pasina isu kusarudza mifananidzo ipi yatiri kuda kutumira kunze.
Kana maitiro acho apera, hwindo idzva rinobva ravhurika rwoga kupi dhairekitori iyo mifananidzo yese iripo inozoratidzwa yatakatora kubva kuchinhu chedu. Tevere, isu tinofanirwa kuenderera zvinoenderana nezvatinoda: vagovane navo neshamwari dzedu, teedzera kune yekunze hard drive kuti uwane backup ...
Darika mifananidzo yakasarudzwa chete
Nzira yapfuura haisi yega iyo iyo iCareFone inotipa, nekuti nekuwedzera, isu tinogona zvakare kuteedzera yakaganhurirwa mifananidzo kubva kune yako iPhone kuenda kune yako komputa. Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa tinya pane yechipiri icon iri pazasi pechishandiso uye inomiririra mufananidzo.
Tevere, mukoramu yekuruboshwe, tinosarudza Mifananidzo kuitira kuti mukoramu yekurudyi mifananidzo yese yakachengetwa pachigadzirwa iratidzwe. Mune inotevera nhanho isu tinofanirwa sarudza rimwe nerimwe, iyo mifananidzo iyo yatinoda kutora kubva ku iPhone yedu uye tinya pane bhatani Kutengesa kunze. Pakupedzisira tinofanira Sarudza mune dhairekitori ripi tinoda kuchengeta mifananidzo iyo yatinozotora kubva ku iPhone yedu.
Tenorshare iCareFone inowanikwa zvese zviri zviviri Mahwindo nezve macOS.
Apple yakaedza kuita kuti basa iri rive nyore sezvinobvira nekubatanidza iyo Photos application muhurongwa hwekushandisa, chishandiso chine basa rekuwana mudziyo wedu uye bvisa zvirimo mumifananidzo nemavhidhiyo atakagadzira kuteedzera iko mukushandisa nenzira iyo vashandisi vazhinji vanogona kuiwana ichinakidza, nekuti panyama haitipe mukana kune ese mafaera kuti tikwanise kuteedzera, kufambisa kana kudzima iwo zvinoenderana nezvatinokoshesa. Tichagadzirisa dambudziko iri zvishoma gare gare.
Nenzira yekuzvarwa, pese patinobatanidza yedu iPhone, iPad kana iPod touch kuMac, iyo Mifananidzo application inovhura otomatiki, ichiratidza mifananidzo yazvino yatakatora pamwe nemavhidhiyo achangoburwa. Kubvisa iyo mifananidzo iyo yatinoda kuchengeta takazvimiririra kana iyo inochengetedzwa otomatiki mukushandisa tinofanirwa kuzvisarudza tobva tadzvanya pakiyi Tumira sarudzo (1), iri munzvimbo yepamusoro yekurudyi kwechishandiso. Uye zvakare, kana nenzira yatinoda kuti vabviswe kana tangovaendesa kuMac yedu isu tinofanirwa kutarisa bhokisi Bvisa zvinhu mushure mekunze (2).
Isu tinogona zvakare kusarudza iyo Inza nyowani sarudzo (3), kuitira kuti iyo Photos application yeMac yedu, otore otora kurodha pasi ese mafoto atakatora pane yedu kifaa kubva panguva yekupedzisira patakabatana. Kana tisina kumbozvibatanidza neApplication application, iko kunyorera kunotora ese mapikicha nemavhidhiyo anowanikwa pane yedu iPhone, iPad kana iPod touch.
Kufambisa iri basa Tinogona kuenda kuAlbums chikamu (4), chiri mukoramu yekurudyi uko kwaunowana ese akasiyana maalbham akagadzirwa nechishandiso (Vanhu, Nzvimbo, maSelfies ...) neaya atakakwanisa kugadzira pane edu mudziyo.
Kana maitiro ekupinza apera, mifananidzo yese inozoratidzwa muchikamu cheAlbums pasi peyekupedzisira Kunze zita. Kana tangomira kushandisa chishandiso uye nekuvhara icho, otomatiki iko kunyorera kuchatanga kupatsanura mifananidzo nevanhu, Nzvimbo, Mavhidhiyo, Screenshots ... (5).
Iko kupi mifananidzo iyo yatinopinza mukati meMapikicha application pane yedu Mac yakachengetwa?
Zvakanaka, ikozvino isu tine mafoto uye mavhidhiyo pane yedu Mac mukati meMapikicha application, asi Vanga vari kupi? Kuti tikwanise kuwana mafoto nemavhidhiyo atakatora kubva kune yedu iPhone, iPad kana iPod touch, isu tinofanirwa kuenda kune Tsvaga uye tinya paMifananidzo uye usachiisa muchikamu chakakodzera, pamusoro chete Mufananidzo Raibhurari .photolibrary uye tinya pane kurudyi bhatani uye sarudza Ratidza zviri papakeji. Muhwindo idzva rinozoratidzwa tichawana edu mafoto mukati meMasters dhairekitori, yakarongedzwa nemakore nemwedzi.
Iyo Image Capture application haitibvumiri chete kutora mifananidzo nemavhidhiyo kubva kune yedu kifaa, asi zvakare inotibvumidza isu kuti titore mifananidzo kubva kumakamera, mavhidhiyo makamera kana ma scanning zvishandiso zvakabatana neMac. Iyi Anwendung inoshayikwa kubva kuMacOS Dock, saka isu tinofanirwa kuiwana kuburikidza neLaunchpad> Vamwe.
Kana tangomhanyisa iko kunyorera, isu tinofanirwa kumirira mashoma mashoma kusvika Mac yedu ziva mudziyo wedu kuti uwane mapikicha nemavhidhiyo iyo yatakachengetera mairi uye nokudaro kukwanisa kuabvisa. Kuti tidaro isu tinongofanirwa kuvasarudza uye kuvadhonza kufaira kwatinoda kusevha kopi yavo vese.
Uyewo tinogona kusarudza dhairekitori rekuenda uye tinya pane iyo Import kiyi yese, kana chatiri kuda kutora mifananidzo yese nemavhidhiyo kubva pane yedu kifaa. Kana tangoita kopi yemifananidzo nemavhidhiyo, tinogona kuenderera mberi nekuzvidzima zvakananga kana kuzvidhonza zvakananga kumarara paMac yedu.
Zvinosuruvarisa iTunes haina kugadzirirwa kuti tikwanise kutora mifananidzo kubva kune yedu kifaa, chimwe chinhu chakaoma kunzwisiswa uye chinotimanikidza kushandisa nzira dzechitatu-bato kana dzimwe nzira dzakaomarara, kunyanya kana tisingashandise Mac.Ne iTunes chinhu choga chatingaite kuchengetedza kopi yekuchengetedza yeedu rese kifaa uye gare gare kuburitsa iyo mifananidzo nechimwe chishandiso, maitiro akaomesesa nekuti zvinoda kuisa chishandiso chakanangana neicho uye chatisingazotaure muchinyorwa chino.
Tinogona zvakare kushandisa iFoto kana Aperture, sekutaura kunoita itunes, asi maapplication ese ari maviri haasisiri kutsigirwa neApple, saka hatisi kuzozviona muchinyorwa chino senzira dziripo. iTunes inotibvumidza kutevedzera mafoto uye mavhidhiyo kubva kuMac kwedu kune chishandiso. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kusarudza maforodha pane iyo mifananidzo iyo yatinoda kuendesa uye kuwiriranisa mudziyo uripo.
Pane dzimwe nguva dzakapfuura takataura nezve iMazing, imwe nzira yeTunes iyo yatisingakwanise kungotora mifananidzo yedu, asiwo tTinogona zvakare kuwedzera kana kudzima mabhuku, mumhanzi, manotsi kuwedzera pakuita akasiyana maitiro naye. Kuti titore mifananidzo yedu yatinoda kana mavhidhiyo, isu tinongofanirwa kubatanidza mudziyo wedu kuMac, kuisa chishandiso uye enda kune yedu terminal, iri mukoramu yekurudyi.
Tevere, tinya paKamera kuitira kuti iite otomatiki maalbum akasiyana atakagadzira anotanga kuratidza. Dzvanya kaviri pane iyo albubhu yatiri kuda kutora iyo mifananidzo, sarudza ivo uye tinya pane Export, iri mukona yezasi yekurudyi rwekushandisa.
Iye zvino isu tinongofanirwa kusarudza dhairekitori kwatinoda kuchengeta mafoto uye tinya Sarudza. Mifananidzo yakasarudzwa nemavhidhiyo zvinotanga kurodha paMac yedu.
Kana tangotumira mifananidzo yakasarudzwa, tinoenda kukona yezasi kurudyi uye tinya Delete, ku bvisa iyo mifananidzo yatakateedzera kune yedu Mac kubva kuiyo iPhone uye nekudaro kukwanisa kudzoreredza nzvimbo pane yedu kifaa. iMazing inotengeswa pa € ​​39,99 uye inowanikwa kune vese PC neMac. Iyo yekuyedza vhezheni inogumira huwandu hwemifananidzo nemavhidhiyo kuti uunze kusvika makumi mashanu muchikamu chega chega, kuti ugone kurodha firimu rako muzvikamu zvakati neyakaedzwa vhezheni.
Iri svondo yakagara iine hukama nevashandisi vejeri, asi hazvitibatsire chete kuisa kana kudzima mafaera .ipa. Ne iFunbox, application yemahara, tinogona, sekune iMazing, kubvisa mifananidzo yese yatakachengeta pane yedu kifaa, nekukurumidza uye nyore. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuenda kuKamera uye sarudza mifananidzo yese yatinoda kutora kubva kune yedu kifaa Ipapo tinoenda kumenyu yepamusoro uye tinya Copy to Mac.
Ipapo isu tinongofanirwa kusarudza dhairekitori kwatinoda kusevha edu mafoto uye mavhidhiyo uye tinya pa Sarudza. Kuadzima, isu tinongofanirwa kumanikidza fn + kudzima kiyi uye kusimbisa kubviswa kwemifananidzo yese yatakasarudza panguva iyoyo uye yatinofanira kunge takachengeteka kuMac yedu.
Dhawunirodha iFunbox mahara.
iPhone Dhata Yekutamisa - EaseUS MobiMover
Kune dzimwe nzira hazvizove, izvo zviri pachena. Chimwe chikumbiro chinotibvumidza kuita zvachose tisina iTunes kana tichiendesa mapikicha kubva ku iPhone yedu kuenda kune komputa, ingave PC kana Mac, iri iPhone Dhata Yekutamisa, application inotibvumidza teedzera mifananidzo yese yakachengetwa pane yedu iPhone, iPad kana iPod touch kuPc kana Mac nenzira yakapusa.
Na iPhone Dhata Yekutamisa, isu hatigone chete bvisa iyo mifananidzo kubva kune yedu kifaa, asi pamusoro pezvo, zvinotibvumidzawo kuteedzera zvirimo kune yedu iPhone, iPad kana iPod touch kubva kuPc kana Mac kuwedzera pakutamisa zvirimo kubva kukomputa yedu kuenda kune yedu kifaa.
Kutamisa mafoto kubva ku iPhone yedu kuenda kuPC kana Mac, uye kukwanisa kuita kopi yekuchengetedza, tinofanirwa kusarudza sarudzo Mudziyo kuMac. Tevere, isu tinofanirwa kubatanidza yedu iPhone, iPad kana iPod touch kune komputa kuti igone iyo uye isu tinogona kuisarudza seye data data.
Tevere, tinosarudza yekutanga sarudzo, Mifananidzo uye pakupedzisira, isu tinofanirwa kusarudza iyo kuenda kwairi kwatinoda kuti mifananidzo yatinoda kutora kubva ku iPhone yedu itevedzerwe. Kutanga maitiro, isu tinofanirwa kudzvanya kiyi yekuTamisa.
Zvichienderana nezvose zviri zviviri nhamba yemifananidzo nemavhidhiyo, uye saizi yavanogara (kunyanya yekupedzisira), maitiro acho anogona kutora yakawanda kana shoma nguva, saka kana tisina kuendesa mifananidzo yedu kuPC kwenguva yakareba, tinogona kuitora nyore.
iPhone Data Transfer ndizvo inowanikwa yeWindows pamwe neMac.
Maitiro Ekuchinjisa Mapikicha kubva ku iPhone kuenda kuWindows
Kana zvasvika pakutora mifananidzo yese kana mavhidhiyo atakachengeta paPC yedu, kana isu tichiziva neWindows file system, zvingangoita kuti nzira yakapusa ndiyo yatakashandisa hupenyu hwedu hwese kuti tikwanise kubvunza uye / kana kuvabvisa.mafaera atakachengetera pakadhi re SD, tsvimbo ye USB, kamera yedhijitari, hard disk
Nehurombo iyo iTunes application, iyo yatinogona kubata kuti ndeapi maapplication atinoisa pane yedu kifaa, pamwe nemavhidhiyo, mimhanzi, mabhuku uye mifananidzo haitibvumire kutora mifananidzo muWindows vhezheni, senge vhezheni yeMac, saka isu tinomanikidzwa kuenda kune dzimwe nzira dzisiri pamutemo. Ehezve, zvinodikanwa kuti iiswe paPC yedu kuti igone kuwana zvakananga mudziyo kuti ubudise kuburitsa mifananidzo neimwe nzira.
Kana isu tajaira iyo faira system uye kwatiri kutevedzera nekunamatira mafaera ndiwo marongero ezuva, nzira iri nyore yekubvisa mifananidzo kubva kune yedu iPhone, iPad kana iPod touch ndeye kuburikidza neWindows faira yekuongorora. Izvo chete chinodiwa kuti ukwanise kuwana mifananidzo nenzira iyi ndeyekuti iTunes iiswe iyo iwe yaunogona kurodha pasi kuburikidza neiyi inotevera chinongedzo.
Kana tangobatanidza chishandiso chedu kuWindows PC, tinoenda kudhiraivho inozoonekwa mu My Computer. Tevere, isu tinongofanirwa kuenda kumafaira akasiyana, nemazita asingatitaurire izvo zvemukati zvingave, sarudza mifananidzo yese, cheka uye unamate mudhairekitori paPC yedu kwatinoda kuzvichengeta.
Ramba uchifunga kuti nguva dzese patinodarika mapikicha chiuru pachigadzirwa chedu, dhairekitori idzva rakagadzirirwa kuzvichengeta, saka isu tinofanirwa kutarisa maforodha ese kuti tione kuti taburitsa mifananidzo yese yatingadai takatora neyedu iPhone, iPad kana iPod touch.
Kutsvaga madhairekitori, isu tichawanawo mifananidzo yatakagamuchira kuburikidza nekutumira mameseji, Mifananidzo isiri mudhairekitori imwe chete iyo mifananidzo kana vhidhiyo yatino gadzira yakachengetedzwa, saka kana tisingade kuirasa, zviri nyore kuti uzviise mukutora.
Tumira mifananidzo nemavhidhiyo
Iyi sarudzo inosarudzika yakafanana neiyo inopihwa neCapture Image application mu macOS. Iri basa isingawanikwe kuburikidza nemamenyu, Zvirinani kubvira pakauya Windows 10, saka kuti tiwane iyo isu tinongofanirwa kuenda kuchikamu chakagadzirwa nedhizaini yedu uye tinya pane kurudyi mbeva bhatani uye sarudza Ngenisa mifananidzo nemavhidhiyo.
Ipapo ichatanga verenga mafaera ese nemavhidhiyo atakachengeta pane chishandiso uye izvo zvinogona kuteedzerwa kuWindows PC yedu.
In inotevera nhanho isu tinosarudza dhairekitori iyo yatinoda kuchengeta mifananidzo yedu nevhidhiyohongu, asi usati wadzvanya Inotevera, tinoenda ku Dzimwe sarudzo.
Mukati meiyi menyu, tinogona kusarudza fomati iyo yatinoda kuti mifananidzo ichengetedzwe pane yedu kifaa. Asi, mukuwedzera, tinogona tarisa bhokisi Bvisa mafaera kubva kuchinhu mushure mekunze kuitira kuti otomatiki kana kupinza kwapera, mavhidhiyo nemifananidzo zvinodzimwa kubva kune yedu iPhone, iPad kana iPod touch.
Kuti upedze maitiro, tinya pane inotevera uye isu tinomirira kuti maitiro apedze.
Sezvo muMac, kana isu tisingade kutendeukira kune zvingasarudzwa zvinopihwa nesisitimu yekushandisa natively, senge mune iyi nzira yechinyakare yekushandisa faira manejimendi, tinogona kushandisa chishandiso ichi, chishandiso chinotibvumidza kutora zvese mifananidzo yechigadzirwa chedu nekukurumidza uye nyore. Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa kubatanidza yedu iPhone kuPC, vhura iyo application, Sarudza Kamera mukoramu yekurudyi kuratidza zvese zviripo mifananidzo nemavhidhiyo. Tevere, tinodzvanya pakutengesa kunze, iri mukona yezasi yekurudyi uye tinoenda kunongedzera kwatinoda kuzvichengeta.
Kana tangochengetwa pane yedu kifaa tinogona kuadzima ivo zvakananga kubva kuchishandiso, kuburikidza nesarudzo iri mukona yezasi yekurudyi uye inonzi Bvisa. iMazing inotengeswa pa € ​​39,99
La IFunbox yemahara kunyorera ndiyo yakanakisa imwe nzira kana tisingade kushandisa zvakabhadharwa zvikumbiro kukwanisa kudhawunirodha zvirimo mufoni yedu kuWindows PC, sezvo ichienderanawo neMicrosoft operating system, kwete neMac chete. Kuenderera mberi nekudhawunirodha zvirimo zvemifananidzo nemavhidhiyo atakachengeta pafoni yedu , isu tichaenderera mberi nenzira imwecheteyo neImazing, nekuti, kunyangwe hazvo interface yacho yakasiyana, maitiro acho akafanana.
Kana tangotora pasi uye nekuisa iyo application tinobatanidza mudziyo wedu.
Kana iyo application ikazviziva, ichatiratidza mukoramu yekurudyi sarudzo dzese dzaunoteedzera kubva kana kuchinhu.
Dzvanya pa Mifananidzo / Mufananidzo kuitira kuti mifananidzo yese yatinayo pane yedu iPhone, iPad uye iPod touch iratidzwe, pamwe nemavhidhiyo atakanyora nefoni yedu.
Isu tinosarudza iyo mifananidzo yatinoda kurodha pasi pane yedu kifaa uye tinoenda kune Export / Copy to PC bhatani.
Kana dzangotorwa pasi kuPC yedu, isu tinongofanirwa kubaya bhatani re Delete / Delete bvisa mapikicha ese kubva kuchinhu chedu.
Maitiro Ekuchinjisa Mapikicha kubva ku iPhone kuenda kuCloud
Kunyangwe muzviitiko zvakawanda zviri nani kuteedzera zvese zvifananidzo zvedu kuPc kana Mac kuti uzviise pane imwe dhirairi yekunze, havazi vese vashandisi vanoshandisa PC kana Mac.Kune vese vashandisi, pane mukana zvakare kwete zvimwe kunze kwekuchengetera ako ese mifananidzo nemavhidhiyo mukati megore uye kana mafaera achida kuenda kune gore rakashandiswa uye kurodha zvirimo. Chaizvoizvo Iyo yepamusoro sevhisi, kuwedzera kune yemahara, inowanikwa yeiyi mhando yebasa inowanikwa muGoogle Mifananidzo, nekuti inotipa isingagumi nzvimbo yekuchengetera mafoto ine resolution yepasi pe12 mpx nemavhidhiyo ane Full HD resolution. Zvese zvinopfuura ipapo, tinogona kuzvichengeta, asi nzvimbo inogarwa ichadzikiswa kubva kune iyo yatakatenga.
Kunyangwe zvingaite senge zvinoshamisa kuti neapp tinogona kuva nemifananidzo yedu yatinoda uye tiwane imwe nzvimbo pane yedu kifaa, ndizvozvo. Google Mifananidzo inotibvumidza kusevha kopi yemavhidhiyo ese nemifananidzo iyo yatinotora ne iPhone yedu mugore. Kana isu tashomeka nenzvimbo, iko kunyorera kunotipa mukana wekubvisa iyo mifananidzo nemavhidhiyo ayo akatochengetwa muGoogle gore.
Ramba uchifunga kuti nguva dzese iwe paunobatana kune netiweki yeWi-Fi (kunyangwe iwe uchigonawo kuzviita pamusoro pe4G, kunyangwe isingakurudzirwe) Mifananidzo yeGoogle inoteedzera mifananidzo yese nemavhidhiyo kuti isu takaita kugore uye kuti vanga vasimo, saka maitiro ekudzima mudziyo wedu akachengeteka zvachose.
Kwemakore akati wandei, vakomana veCupertino vakatanga ipa zvirongwa zvekuchengetedza zvitsva, zvirongwa zvinokwira kusvika ku2 TB uye umo matinogona kuchengetera zvirinani zvese, nekuti haisisiri imwe sevhisi yekuchengetedza kubva kune yakajairwa, kunyangwe ichine yayo pekusarudzika.
Vese vatengi veAmazon Premium vane zvavanogona chirongwa chisingagumi chekuchengetedza muAmazon gore, sevhisi inotibvumidza kuchengeta mavhidhiyo mazhinji semifananidzo yechigadzirwa chedu isu chatinoda mukugadziriswa kwavo kwepakutanga uye tisina chero rimwe diki kudhinda. Kana iwe uri mushandisi weiri sevhisi, iyi sarudzo inogona kuve yakanyanya kukurudzirwa kune yako nzvimbo inoda, kunyangwe iri yakanangana kana inoenderera nekufamba kwenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuchinjisa mafoto kubva ku iPhone kuenda kune komputa
Ini munguva pfupi yapfuura ndawana chirongwa chinonyanya kubatsira kubata mafoto eApple - CopyTrans Photo!
HomeKit muIOS 14 ichavandudza kuzivikanwa kwechiso, wedzera Night Shift uye nekuvandudza odhiyo yeiyo HomePod